तीन वर्षका चर्चित सस्पेन्स साउथ मुभी
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन बलिउडतीन वर्षका चर्चित सस्पेन्स साउथ मुभी
विराटनगर / फिल्म सुरु भएदेखि अन्तिमसम्म दर्शकको ढुकढुकी बढाउने फिल्म भनेकै सस्पेन्स फिल्म हो । नेपाली फिल्म उद्योगमा यस्तो फिल्म निकै कम बन्ने गरेका छन् । नेपाली दर्शकले सस्पेन्स फिल्मको स्वाद चाख्न दक्षिण भारतीय फिल्मलाई नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष (२०२०) मा सस्पेन्सले भरिएको धेरै दक्षिण भारतीय फिल्महरू हिन्दी संस्करणमा आए । लकडाउनका बेला घरमा समय बिताउन फिल्म हेर्ने धेरैको रोजाइ दक्षिण भारतीय फिल्म थियो । सस्पेन्स, क्राइम, साइन्स फ्रिक्सनल र मर्डर मिस्ट्री जस्ता फिल्महरु धेरैको रोजाइमा पर्छन् । यी हुन् सस्पेन्सले भरिएको चार दक्षिण भारतीय फिल्महरूको सुची :
टोनी : सन् २०१९ मा आएको एक साइकोलजिकल मर्डर मिस्ट्री फिल्म हो ‘टोनी’ । फिल्ममा भिपुल के रावलको लेख्न तथा निर्देशन रहेको छ । फिल्मको कहानी एक साइको किलरको वरिपरि घुमेको छ जसले हरेक हत्यापछि पादरीलाई हत्या गरेकोमा पश्चाताप मानेको स्वीकार गर्ने गरेका हुन्छन् । एकदिन एउटा कलेज प्रोजेक्टको क्रममा केही विद्यार्थीहरूले चर्चमा हत्याराले पादरीसँग गरेको पश्चातापलाई रेकर्ड गर्छन् र हत्यारालाई ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयास गर्छन् । फिल्मको कहानी यसरी सुरु हुन्छ । साइको किलर को हो र किन निर्दोष व्यक्तिहरुको हत्या गर्छ ? यही हो ‘टोनी’को सस्पेन्स । फिल्म निकै रोचक छ । यो फिल्म हिन्दी भाषामा युटुबमा उपलब्ध छ ।
युथम सेइ : सस्पेन्सले भरिएको फिल्मको अर्को सुचीमा पर्छ ‘युथम सेइ’। यो एक तमिल फिल्म हो । सन् २०११ मा आएको युथम सेइको हिन्दी नाम ‘क्राइम केस ९९’ राखिएको छ । फिल्ममा मिस्सकिनको लेखन तथा निर्देशन रहेको छ । फिल्मको कहानी एक पुलिस अफिसरको वरिपरि घुमाइएको छ जो आफ्नो हराएकी बहिनीको खोजीमा हुन्छ । आफ्नो बहिनीको खोजीको क्रममा उनले एक रहस्यमय केस हात पार्छन् । कसैले एउटा बाकसमा अन्जान व्यक्तिको हात काटेर राखिएको हुन्छ । त्यो कसले र केका लागि गरेको हो ? यो रहस्यमय हुन्छ । यसै केसको सिलसिलामा फिल्मको काहानी अगाडि बढ्छ । यो फिल्म हिन्दी भाषामा युटुबमा उपलब्ध छ ।
अश्वथामा : सन् २०२० को सुपरहिट तेलुगु फिल्म अश्वथामाको हिन्दी संस्करण सार्वजनिक भइसकेको छ । फिल्ममा एक्सन स्टार नागा शौर्य मुख्य भूमिकामा छन् । अश्वथामा एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म हो । सस्पेन्स साधारण भए पनि फिल्मको कहानी निकै रोचक छ । यो फिल्म पनि युटुबमा उपलब्ध छ ।
चक्रका रक्षक : एमएस आनन्दको निर्देशन रहेको साइन्स थ्रिलर फिल्म ‘चक्र’ को हिन्दी नाम ‘चक्रका रक्षक’ राखिएको छ । फिल्ममा विशाल, श्रद्धा श्रीनाथ, रेजिना क्यासान्ड्रालगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्मलाई विशाल आफैँले निर्माण गरेका हुन् । ह्याकरले डेटा ह्याक गरेर पैसा चोरी गर्ने कथालाई फिल्ममा उतारिएको छ । फिल्मको हिन्दी संस्करणमा विशाललाई चर्चित डबिङ आर्टिस सङ्केत माह्त्रेले आवाज दिएका छन् । चक्रका रक्षक १९ फेब्रुअरी, २०२१ मा तमिलसँगै हिन्दी भाषामा रिलिज भएको थियो । यो फिल्म युटुबमा अनौपचारिक रुपमा हालिएको छ ।